Fandrindrana ny fifamoivoizana :: Natomboky ny polisy ny fampanarahan-dalàna an’ireo sarety sy posy • AoRaha
Fandrindrana ny fifamoivoizana Natomboky ny polisy ny fampanarahan-dalàna an’ireo sarety sy posy
Raikitra ary andrasana raha hitohy mandavan-taona tokoa ny famerana ny fifa­moivoizan’ireo sarety sy posy eto an-drenivohitra. Nisantatra ny fampiatoana ny fifamoi­voizan’ireto karazam-pitaterana efa tena tranainy ireto ny Polisim-pirenena, teny Anosy omaly, taorian’ny famoahan’ ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo ny naoty milaza ny ora azon’izy ireo hiasana, tamin’ny herinandro lasa iny.
Hatramin’ny 7 ora maraina no afaka mandeha ireo posy sy sarety, avy eo eo anela­ne­lan’ny amin’ny 10 ora sy 12 ora antoandro ary amin’ny 2 ora hatramin’ny 4 ora tolakandro. Hiitatra amin’ireo lalam-be hafa eto an-drenivohitra izao hetsika natomboky ny polisy, teny Anosy izao.
« Mba hanalefahana fitohanan’ny fifamoivoizana eto an-denivohitra no tanjona. Nanao fampahafantarana sy fanentanana momba ny fepetra fahafahan’ireo sarety sy posy mivamoivoy aloha ny Polisim-pirenena, mialoha ny handraisana fepetra amin’ny tokony hanajan’izy ireo ny ora voatondro », araka ny fampitam-baovao avy amin’ ny Polisim-pirenena.
Marihina fa mahatratra dimanjato sy arivo no isan’ ireo tompona sarety sy posy ao amin’ny Fikambanana Tompona Posy sy Sarety eto Antananarivo (FTPSA), an’alina kosa no isan’ireo posy sy sarety mifamezivezy eto an-drenivohitra.
Tan-tsoroka teny Ankadivory :: Nahazo fanampiana mahavita herintaona ireo ankizy kambotin’ny CBA